नेपाल हाम्री आमा होइनन्, नेपाल त हाम्रो रगत चुस्ने बोक्सी हुन् जो हरेक विदेशी सँग रात काट्छे - hamro Desh
काठमाडौँ: मधेश अभियन्ता डा. सिके राउत अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा छन्। मधेश अभियानका क्रममा मोरङको रंगेली सोरामांगसिंह गाविस–३ मा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गरेर फर्किने क्रममा सादा पोशाकका प्रहरीले शनिबार राति साढे ८ बजे उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रमाणका आधारमा राउतलाई पक्राउ गरिएको बताए। ‘उहाँ राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने काममा संलग्न रहेका कागजात तथा श्रव्यदृश्य प्रमाण हामीसँग छ’, कार्कीले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘अहिले अनुसन्धानको चरणमा छौँ। हामीले भेटेका सामग्रीबारे उहाँको प्रतिक्रिया बुझ्छौँ।’
यदि आँखाका बदला आँखाले सबैलाई अन्धो बनाउँछ भने त्यसले अझै पनि गोरा-काला रहित दुनियाँको निर्माण हुनेछ। त्यसले अझै पनि रंगभेद रहित समाजको स्थापना हुनेछ, जहाँ छालाको रंग हेरी कसैलाई ज्यानै जाने गरी कसैले पिट्ने छैनन्।
खाली दुष्टहरूसँग आँखा बाँकी रहनुभन्दा, उनीहरूले पुन: आफ्नो दुष्टता देखाउने अवसर पाउनुभन्दा आँखाका बदला आँखाले अझै पनि बढी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नेछ। दुष्टहरूसँग आँखा बाँकी रहनु झन् खतरनाक छ, के थाहा आँखापछि, घाँटीतिर उसका हातहरू बढोस्। ती आदर्शहरू सुन्नका लागि महान् लाग्छन् तर संसारमा त्यसले दुष्ट र दानवहरू मात्र बाँकी राख्नेछन्। आफ्नो अर्को गाला तिनीहरूअगाडि थाप्नुले तिनीहरूलाई अझ अर्को मान्छेलाई हिर्काउने हौसला मात्र दिन्छ। तपाईं सोच्नुहुन्छ उनीहरूमा मानव जगाउन सकिन्छ? मानवभित्र कहिले पनि मानव थिएन। उनीहरूको कान बेस्सरी बजाएरै हेर्नुस्, अरूलाई हिर्काउनै बिर्सिन्छ।